April 9, 2020 NEWS 32
GAROOWE(P-TIMES) – Inkastoo aysan badneyn hadda shaqooyinka ka socda gudaha Aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe, haddana wararkii u dambeeyey waxay daaha ka rogayaan in Agaasimihii guud ee Madaxtooyada Maxamed Cabdiladiif oo horey uga tirsanaa Shaqaalaha Hay`addaha samafalka ee gudaha Soomaaliya uu iskaga tagay shaqada, ka dib markii ay wada shaqeyn waayeen qaar kamid ah saaxiibada Madaxweyne Deni.
Warsidaha PuntlandTimes, wuxuu ogaaday in Agaasimaha Madaxtooyada Maxamed Cabdiladiif uu ahaa nin in badan garanayay waajibaadkiisa shaqo, marar badana diiday fulinta waxyaabo aan aheyn shaqadiisa, taas oo kaliftay in ay dhibsadaan kooxda saaxiibka la ah Madaxweyne Deni.
Sidaas oo kale mid kamid ah Madax qeybeedyada Madaxtooyada ayaa la sheegay in uu khilaaf soo kala dhexgalay, gaar ahaana kaas oo ku saleysnaa xagga dhaqaalaha, waxaana ay keentay in Agaasimaha Guud u arko in waajibaadka shaqada la kala dhantaalayo ayna tahay mid ka socota xagga Madaxweynaha.
Madaxtooyada Puntland hadda maleh Agaasime guud, waxaana Kusime Agaasime ka ah Kuxigeenkiisii, iyadoo Agaasimaha guud ee aan wali xilka is casilin dib ugu laabtay shaqooyinkisii Hay’addaha caalamiga ah ee Soomaaliya.
Maxamed Cabdiladiif wuxuu horey uga yimi Hay’adda Save Children, waxaana wararku sheegayaan in uu hadda helay shaqo ka sareysa tii uu horey u hayay, isla markaasna uu go`aansaday in uusan dib ugu laaban shaqada dawladda ee Madaxtooyada
Kooxda saaxiibada la ah Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ee loo yaqaano Shuraakada ama Iskaashatadu, waxay horey u sheegeen in aysan raali ka aheyn magacaabidii Agaasimaha guud ee Madaxtooyada, waxaana hadda keenida Agaasimaha cusub durba ka dhashay is heysi ku aadan shaqsiga loo dhiibayo.
Madaxweynaha Puntland wuxuu diiday labo ruux oo doonayay in ay booskan qabtaan, balse warar hoose ayaa sheegaya in mid kamid ah ehelada Madaxweyne Deni uu doonayo in uu jagadan u magacaabo, si ay uga yaraadaan culeyso badan oo uga yimaada xagga shaqada.
Iskaashatadu waxay xooga saarayaan sidii ay Hay’adda dawladda uga saari lahaayeen cid kasta oo ay u arkaan in ay ka soo horjeeda damacooda, waxaana ay xooga saarayaan sidaas oo kale in qof ka aragti duwan uusan qeyb ka noqon Hay’addaha dawliga ah ee mandiqada Puntland.
Cabdinasir Cigaal says:
Waxaan rabaa inaan u sheego dadka bartaan wax ku ee iska leh mareegtan waagii hore waxa aan ahaa markaan indhaha soo kala qaado qof eega oo akhriya wararka aad nosoo gudbisaan aniga abaal idiinka hayay , hadase sida ii muuqata dhabe kale ayaad qaadeen ujeed aad ka leedihiin idinka oo ka tagay war soo gudbintii hagar la’aanta ahayd hadana sida ii muuqata waxaad noqoteen siyaasiyiin dano gaar ah eegta isla markaa dhexdhexaadnimadii ka tagay idinka oo ku luminaya shacab badan oo aan ka mid ahay ee waliba kasoo jeeda gobolka aad magaciisa wadateen . Waxa aan huba danaha aad illaashanaysaan iyo kuwa aad ku waayaysaan hadii aad isu barbar dhigtaan si aad waliba danihiina ku miisaamaysaan inaysan isu dhawayn waxa aan idinkula talin lahaa si waliba codsi ah in aad naftiina ay taaydaba ugu shaqaysaan si Rabbi ka cabsi ah iyada ayaa walaahi 100% idiinka sharaf iyo jeeb fiican wsw
Cabdinaasirow walaal hadaad kudaafad dhex gasho maxaa kaa raaci kara oo qashin iyo qarmuun ahayn, qolada page kaan qodhaa warkaa beentaah oo ay maanta qoreen bari ayay mid kaloo beeninaya inoo soo qorayaan.
Sh kuli says:
Walaalyaal sidan aad waxku wadaan sax maaha, waa la idinka xiisa dhacay, webkii sharafta badnaa waxaad u rogteen marfish fadhi ku dirir. Wal sharaftii inoo soo cesha iyo qiimahii aad lahaydeen
Haji Dab-casar says:
Sifiican baa wax u wadaan hadii eebe xukmahaye halkaaas naga haya. Allah haydin barakeeyo
Hadaanu nahay xerta xaaji dabcasar iyo inta nabad iyo nolo taageersan waanu idin taageersanahay ee hawsha inoo wada puntland maqaarka ka siiba khayr allah haydin siiyee. waanu idiin habmalyaynaynaa
Dhamaan website yada ( internet online media) ee Soomaaliya waxaa la oran karaa, waa ku xnta iyo war aan jirin qora.dunida kale waa qirtaan,
(Gossip or Tabloid) ayaa loo yaqaan.
Hadda arinto sidaasi tahay,waa in wararka ay qoraan,loo qaato in sy been yihiin.
Hubsiino hal baa la siistaa bay Soomaalido tiraahdaa.
Dabada maadaa dhaqaalaha farmajo usoo diro saaxiibadeen lagu soo3mariyaa
Maxaa ku bogaadisay saaxiibadeen oo aan been too puntland burburin ahayn
Sorry please accept my sincere apology, I mean DABCAR, it was typing error
Dont you worry my buddy. Somali language is the richest and the oldest language in the universe. No matter how much you twist and turn it upside down a common somali will self correct it and get the meaning.
Saaxiib sida lagaa dheehan karo waxaa iskaga kaa qaldamay shakhsi iyo shaxda siyaasadeed. ‘Nabad & Nolol’ siyaasad kuma taageysanid ee waxaad reer hebelnimo ugu xagal daacinaysaa Madxweyne Farmaajo oo isaga iyo xisbigu kuu ma kala takoorna. Haddii uu berri ka maalin xisbigaas ka baxo adiguna mucaarid baad ku noqon doontaa weeye macnuhu. Haddaba aan maanka kuu yar toosiyay runtan iga guddoon.
Haddii sida aad ku guubaabisay Puntland “maqaarka laga siibo” waxay boog weyni ka gaadhay jidhka qaranka Soomaaliya waayo Puntland waa geyiga Soomaaliya ugu baaxadda weyn ee uguna straatijisan. Dhaawaca soo gaara Soomaaliya ayaa la bukoon doonta – dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, iyo siyaasad ahaan inta ba. Waxaad fahantaa oo kale in qarannimada ka sokoow ay Soomaalidu qabiilo guud u kala qaybsanto oo laga ma maarmaan ay noqonayso in masiirka iyo danaha heerka qabiilnimo wax walba lagu saleeyo.
Marka adiga oo Mareexaan ah aad Puntland oo ah gurada aad Daarood ahaan ka soo askumatay oo ka soo faracantay curyaamisay sow ma tihid nin bowddada iska toogtay oo iskii isu naafeeyay? Caadifadaha waxaa kun jeer dhaama caqliga oo la kaashado. Waa iga talo.
Waxaa fiican in shaqsiyaadka webka fikirkooda ka dhibta ay keenaan xog ay ku beeninayaan wararka webka soo qoro. Warka waxuu noqdaa been markii la keeno xog beeninaysa. Hadii kale tukaafad ayaa lagu wada galgalan. Aanu sugno dhowr beri. Xaqiiqadu ayaad banaanka is keenin.
Walaal annagaa Mareexaan ah, Puntlandna annaga oo aana weligayo cag dhogin, u hureeyna naf iyo maalba difaaceeda. Tabkale, haddee Farmaajo meesha Mareexaan ma geeysan umana joogo, marka ma garan waxa aan u argeeyno qaar Beesha Sade ku abtirsado oo si indho la’aan ah u jidbeeysan Nabad & Nolol iyo ninkaa u shaqeeya, beelaha Irir Samaale. Kuwaasi xaalkoodu waa, Dawaco meeshii aay Macal ku cuntay, ayaay macaluul ugu baqtidaa!!
Ugaas Allaah Yacizzak! Hadalkaaga qaaliga ah xaadda ayuu i dhaqaajiyay oo waan hubaa in ay dhab iyo lillaahi kaa tahay. Waxaan kun jeer kaaga mahadinayaa sawirkaas aad inoogu naqshadeysay jabka uu maanta Farmaajo u geystay tolkayo libaaxyada Sade Daarood oo nabar weyn nagu noqotay xaqiiqatan.
Waa sababta aan aad ugu ololeynayo in tolweynaha Daarood ay habacsanaantan iyo liidnimadan laga uurkutaalloodo heeryadeeda iska rogaan oo ay maankooda, taladooda iyo masiirkooda mideeyaan si aan dib dambe looga dhex kalluumeysanin ama uusan nacas dambe oo ka dhashay shimbirka uga dilin. Caalamka waxii hadda ka dambeeya tartan adag ayaa loo gali doonaa cunnada iyo biyaha oo gabaabsi noqon doona maadaama ay cimiladu saani isu beddelayso oo ay saameyn weyn ku yeelan doonto waxsoosaarkoooda.
In kasta oo aan Soomaaliweyn ahaan u jeclaan lahaa in aynu mandiqaddeena waasaca ah isku dugsano oo aynu waxsoosaarka beeraha iyo biyaha iskaga filnaano ayaanay Soomaalida is irirsata wax iskuhalleyn is aaminaad ah lahayn oo waa kuwan uu dalku ka xasili la’ yahay. Sidaasi aawadeeda ayaan anigu jeclahay in maadaama ay Daaroodku ku fadhiyaan dhulka uugu baaxadda weyn barriga iyo badda ba ay sha’nigooda mideeyaan oo ay waxsoosaarkooda is ka kaashadaan oo iska dabbaraan min Buulaxaawo ilaa Kismaanyo ilaa Gedo ilaa Mudug ilaa Kililka Shanaad iyo ilaa iyo Puntland cirifyadeeda ugu dambeeya. Nacasnimadeena uun baa nagaga gudban run ahaantii.
Suldaan waa sidaa. Jab kasto oo aay Gaalo Muslim u geeysato, waxaa u sabab ah
, horgale Muslim ah oo u xagal daaciyey Muslimiinta, Jab kasta oo aay Soomaali kale Daarood u geeysatana, waxaa u sabab ah, mid Daarood ah oo ah, ag dile idman ah. Waana in xal loo helaa arrintaadi.
Carab Juur says:
Waa Arin wanaagsan.
Waxaa wanaagsan in runta la sheego oo qabyaalada iyo faanka la iska daayo,Soomaaliya shaki kuma jiro in ay waxba isdhaamin.
Ka danbow in ka badan rubac qarni bay jirta,qaranjabkii Soomaaliya,
Ma jirto meel ka mid ah dalka Soomaaliya oo runtii la orankaro waa ka hirgalay,maamul iyo sharci la isko halayn karo.
Wax Soomaaliya oo wada jirta oo mid ah logo waayey,in aan lago helayn
Saaxiib xaqiiqadu sida ay tahay ayaan kaa dareemayaa in aad caksigeeda ka aaminsan tahay sida hadalkaagan hoose laga dheehan karo:
“Wax Soomaaliya oo wada jirta oo mid ah logo waayey,in aan lago helayn maamulo beeleed”.
Soomaaliya dal iyo qaran ahaan ma wada jiri karto haddii aanay Soomaalidu deegaan iyo bulsho ahaan marka hore heer hoosaadkeeda ka soo dhismin. Qaranku iyo dowladnimadiisu waa daar oo kale oo haykal ayay leeyihiin. Maadaama uu dal kasta geyiyo, gobollo, iyo degmooyin iyo bulshooyinka ku dhaqan ka kooban yahay ayaga ayaa u ah lebennada (ama bulukeetiyada) kala sarreeya ee uu qaranku ka unkamayo.
Dowladdu na dabaqado qaabkaas u sii kala hooseeya ayay u sii dhaadhacaysaa ilaa iyo heer tuulo. Runtii na juuqraafigaas ayay ku saleysan tahay ee haybta ma aha, laakiin maadaama ay Soomaalida aan Daaroodka ahayni ku adkeysteen in la is kala lafa guro oo hayb wax lagu saleeyo danta ayaa khasbaysa in hanaankaas wax lagu soo dhiso. Ma jiro daar dhismaheeda jiingadda kore laga soo billaabo sida aad ku talisay.
Sababta aan u leeyahay “Soomaalida aan Daaroodka ahayn ku adkeysteen…” waa midda aan la inkiri karin ee ah in teer iyo xilligii gumeysiga Soomaalida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed u soo halgamaysay oo naf iyo hanti ba ku soo khasaariyay ay Daaroodka yihiin. Al ‘aana Daarood baa u taagan dib u dhiska qarankii uu qummaatiga iskaga taagi kari waayay Isaaqa iyo Hawiyaha ee markii dambe na iyagu ciidda afka u dareen 1991kii.
Walaal Boodhari,adiga keligaa ma aha,oo lagula yaabi maayo,sababtoo ah,waxaa jira,tiro aad u badan Soomaalida ah,oo wax aan wabyaalada ahayn aan garanayn,qofka noocaasi oo kale,dawo ma laha.
Qannigan DNA baad weli ku ku fakirsysaa reer heball iyo kala qaybin,shacabka Soomaaliyeed duf ku bax.sooyaalka taarikhda bin’aadamka halkii bilowga ahayd ee nolasha aadanaha weeye qabyaalad iyo arimaha aad aaminsantahay.
Maandhe dadku rayigooda waa u xor oo in aad habaartanto waa kugu qalad. Hadalkaaga iyo haaraamkaagu waxay ku baxayaan kuwii qaranka naga galaaftay oo ilaa maanta uu dalku ka xasili la’ yahay ee USC/HAG iyo SNM oo aan hubo in aad ka soo jeeddo.
Fallaadhi gilgilasho kaaga ma go’do oo dalkan anagaa mar ba raqdiisa naqaska ku afuufna oo soo nooleyna. Tacabka nooga baxay waxba kama ogid oo xanuun kugu ma hayo. Waxba anaga ha isu kaaya qarinin waxa Mudug iyo koonfurta haddeer laga wado waad u jeeddaa oo waxa Sanaag iyo Sool laga wado waad la socotaa. Duff waxaa ku baxaya mar labaad la dage iyo wax ka sii liita oo anagu intaas waynu ka fariidsannahay oo ka foojigsannahay.
U sheeg mooryaanta USC iyo SNM oo weli qoriga dabka ee qabyaaladeed Soomaalida kula dhex wareegaya.
Ogaada in aan wiligiin garabkiina taaganahay. Dal waxaa u dhinta una danqada nin leh.
Boodhari (qabiiliiste) biladihiisii xiran oo aan wax kale,aan aaminsanayn baadtahay,adigoo kale wax dawa ah malihid.
Xagaa falaagooyinkii aad soo qaaday,ee qaa’ino wadanka ahaa,waa kuwan.
SSDF,SNM,SPM,USC,SDM,SNF iyo kuwa kale waxs ay ahaayeen,falaagooyin ay tababar iyo huba siisay Ethiopia.
Waa taa runto,balse adiga kuwa qabyaalado madax martay,waa ay kula fiicanyihiin falaagooyinkaasi beelaha.
Boodhari cudurka qabyaalada keligaa ma ahaa,ee bal mar sida bini’aadmka kale ee dunida u fakir.
Inta uusan Bodhari kuu jawaabin…. yaad u taqaan qabyaaladeeyste????
Ma sheegi kadhaa faraqa u dhexeeya qabiil iyo qabyaalad????.
Wadanka ingiriska/Uk waxaa loo kala daganyahay qabiilo.
Waa…. English iyo Scotsish iyo Irish iyo Welsh iyo Connish of conwell. Iyo kuwa kale oo yaryar. Waxay dhisteen wadan dunida sanka ka tolay oo koraxdu ka dhicin. Bal noo sheega wadan aan qabiil ku dhisneyn Dunida.
Kuwa qabiilka eedeeya waa kuwa dulmiga iyo foodada jecel.
Alle ayaa abuuray qabiilka.
Waxaa Alle quraankiisa ku yiri sidatan;;
“We created you into male and female and divided you into nations and tribes so that you may know one another,Not that you may despise one another, surely the best among you are those who fear Allah the most”
Bal noo sheeg daliisha aad u haysid in qabiil xunyahay ama in qabaailo loo kala dago xuntahay.
Dulmi waduhu markii la yirahdu dulmiga jooji waxuu dadka ku eedeeyaa in ay yihiin qabiileyste ama cusuli.
Tusaale waxaanu kusoo qaadan karnaa madowga America dagan.
Markii cadaanku farta ku fiiqo falxumada madowga…. waxay madowgu ku eedeeyaan cadaanka cusulinomo.
Website aanan ahayn kuwa Beesha Daarood bal gal oo fiiri sida qayaxan ee aay qabiil qabyaaladeysan ugu hadaaqayaan. Sida, oday yaasha beelaha Hawiye, D&M, beelaha direed, Garxajis iwm ah.
Haddii aay Yamyam iyo qadaad weyn qabiillo dhoodhoob ah sidaa ula soo taagan yihiin habeen iyo dharaar, bal weeydii waxa Daarood oo Xabag barshadii Soomaaliyeed ah, u diiday in uu xitaa magaciisu xuso!!
Illeen qof nooli waxka yaabiya ma waayo !!!!!!!!!!!
Weli waxaad ku dhex jirtaa,sanduuqii,wabiilka,waxaad isko qaldaysaa,qomiyad iyo qabiil,Irish ka English ka ,Scotish ka iyo wales waa wa Nationalities.
Soomaalido waa qowmiyad, adiga iyo kuwa aad difaacayso,mowqififkoodo waa cadyahay.
Saldhigyada iyo xaruumaha qabyaalada,jaahiliga ah,
Waa 18 kii gobol ee Soomaaliya cidina kama fayooba.
Qabyaalada xiligaan ka jirta Soomaaliya waa ay ka xuntay,waxwalba ee Soo maray geyiga Soomaaliya,Cronavirus ka ,waa laga gudbi,argagixisada way dhamaan,Cudurka qabyaalada oo aad qiilka u doonaysa,weeye kan aafada Soomaaliya.
Nasiibdarada Soomaalida u gaar ka ah,ayaa ah,in qabyaalado ay tahay,shay ka indha tiray,wadniyada,taasi oo la xiriirta hab nololeedka adka u danbeeya,oo dunido waa ka gudubtay.
Soomaalido waa mid ee qofkastow kaakintsada ka qaado.
your welcome brother. This dont seem to understand what they are talking about. They destroyed the somali state with thier deep rooted clanist hate and now trying to wash their guilt by blaming God created DNA.
Qabiil dambi ma leh.
Laakiin waxaad qirtay in nacayb qabyaaladeed dulmi weyn yahay.
Hadii aad saas u ogtahay in nacayb qabyaaladeed sun yahay, maad tolkaa ka wacdisid oo ka dhaqdid cudurka ku jira oo ka burburisid isbaarooyinka ay u dhigteen soo celinta qaranka(state) somaaliyeed.
Tan ku xigta… somali waligeed iyo waaqeed ma noqon qaran (state).
Intii ka horeysey duulaankii gumeystaha Somali waxay ahayd qaaruun
(A nation or nationalities) oo is garab dagan oo nabad iyo ixtiraam ka dhexeeyo. Waana sababta aan ugu matalay UK.
Waxaa daliil kuu noqonaysa heesta ay dumarka Daaroodku dhalaakooda ugu heesi jireen ee la magac baxday…
“Huuwaayow huuwaa, hooyo ma joogto, kud iyo koofur Aadey”
Taasu waxay kuu xaqiijinaysaa in lakala daganaa oo la ahaa qaaruumo (nationalities) is garab dagan. Maxaad u diidantahay in aanu xal ka raadino habkii awoowayaasheen.
waxna yaan boor laysku qarin.
Dhibaatada ilaa iyo 1991 ka socota gayiga somaaliyeed waxay tahay in NIN uu doonayo in uu NIN kale korka ka fuulo.
Taasuna waa qarow aan lugo ku qotomin.
Qabiilow raali ahaw
Adiga keligaa ma aha,waxa qaba cudurka qabiilka,
Argtida aad qabiilka ka aad aaminsantay, waa cudur aan dawo lahayn,
Dugsi ma leh qabyaalade,balse kuwo aad adiga aad ka mitahay,sida Nicotine ka tobaakada ayuu u qabtaa.
Haddii aan hoos u soo dhaadhaco,waxa aad aadka u aaminsantay ee qabyaalada ah,wax jira ma aha,sida cad ,waa dad danwadaag ah,ama (Society) oo iso yimi oo magaca,isko raacay,waana dad iso yimi,sida taariikdo ay xustay.
Waxaase muhiim ah,in qowmiyada Soomaaliyeed,dhan aad u aragtid mid.
Waa arin aysan si sahal ah,u fahmi karin,dadka qabyaalada iyo kala qaybinto ay mabda’ u tahay,sida badan,mujtamaca Soomaaliyeed.
Waxa wiimo ku fadhiya shaqsiga aad tahay,in uu aaminsanyahay,in
In dadka Soomaaliyeed aan loo kala soocin,sida aad ku soo barbaartay ku dhisan hab beeleedka.
War ilbaxnimo waxa kaaga dhiman,in aad u fakirto,sida dadka dunida
ku dhanq, oo Soomaalinimada ay kaala waynaato,qabyaalada duliga ah.